ILuz de Maria-Ukuhluza ingqolowa-ukubala usiya eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla NgoSeptemba 25th, 2020:
Bantu abathandekayo bakaThixo: Yanga intsikelelo yoThixo oyiNgcwele ingohla phezu komnye nomnye wenu. Abantu bakaThixo bathembekile maxa onke, baqhotyoshelwe kwiMagisterium eyiyo yeCawe, bazibophezele ekuhlaleni iNdlela, iNyaniso kunye noBomi, bahlala kude nobubi nayo yonke into ekhubekisa uBathathu Emnye oNgcwele.
Ngalo mzuzu, kancinci kancinci, uthando oluNgcwele lusahlula ingqolowa kumququ; UKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu abayi kuvumela umququ ukuba uphele nengqolowa (cf. Mt 13: 24-30). Endaweni yokuba bobabini bavavanywe ukuze abanye bazaliswe yimfuno yokuphila ngokudibana nothando oluNgcwele kwaye abanye baya kuba nethuba lokubuyela ekubeni yinxalenye yeNtsalela eNgcwele. Ngokubhekisele kwintsalela engcwele: funda… Ukubakho kuma phambi kwakho kokuba ube phakathi kwale miphefumlo isusa iintlungu ebekufanele ukuba ziyabandezeleka kwesi sizukulwana sonke, esicaphukisa iintliziyo ezingcwele kaninzi-njalo ngomzuzu ngamnye odlulayo. Abantu abahlala beqhotyoshelwe kwi-ego yabo yobuntu abayi kukwazi ukunyuka ngokomoya, kodwa baya kutshona eludakeni, kwaye ngaphandle kokukuqaphela, ngokuzingca kwabo, baya kuzigweba.
Ndikubiza ngokungxamisekileyo ukuba uphile kwaye ubonakalise ukholo lwenene, ubizelwe ukulandela uKristu ngomoya nangenyaniso. (cf. Mna Yohane 4: 1-6) Akwanele ukuphindaphinda imithandazo ngokusuka kwimemori; Ngeli xesha umntu kufuneka azalele ngaphakathi kuye kuthando uKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu abalulindeleyo nabangakhange bamnike lona abantu. Esi sizukulwana kufuneka sinikele kweyona Ngcwele ingcwele into ethe abantu bayala ukuyinika ngaphambili, bazinikezela kwiingcinga zobuxoki, baphambuka kulwakhiwo lwanamhlanje lukamtyholi kwaye ngaloo ndlela bawela kwinkqubo yenguqu ekubeni zizidalwa zikaThixo zenziwe izidalwa ezinikiweyo. ngaphaya kobubi, ukuthembela kumtyholi.
Bonke bafumana umoya, ukukhanya kwelanga, kwaye zonke zikhanyisiwe yinyanga, kodwa ayingabo bonke abaziyo ukuba ubomi bomntu bondliwa zezi zinto. Kunjalo ke nasemoyeni: Bonke bayaliva iLizwi eliNgcwele leSibhalo esiNgcwele; bayifunda, kodwa ayizizo zonke ukuzondla ngayo. Bayayifumana, kodwa ayingabo bonke abayisebenzisayo kubo: ayingabo bonke abazondla ngayo okanye abayizisayo. Ke ngoko, ayizukuhlanjululwa ngendlela efanayo, umahluko olele kwindlela abaphila ngayo kwaye bayenza ngayo iMithetho yoMthetho kaThixo… Wenziwe ngokomfanekiselo kaThixo nangokufana naye (Umfu. Gen 1:26)… Uwuphila njani lo mfanekiso ukufana noThixo? Ukuthotywa kwayo okanye kukhuliswe? Wonke umntu unoxanduva loku, wonke umntu unoxanduva ngekamva lakhe kunye neziqhamo abaza kuzivuna.
Amandla endalo atshintshiwe yimikhosi efanayo yokuxhuzula efumaneka embindini woMhlaba kunye nezo zivela kwiNdalo iphela, yiyo loo nto iintlekele zendalo kunye nezo zivela kwi-Space zihlala ziphindaphindekile kwaye zibukhali. Imimandla eselunxwemeni kufuneka ilumke kwaye ilungiselelwe: amanzi eelwandle aya kunyuka ngokungaqhelekanga, azikhukulise; Khumbula ukuba amanzi ayacoca, kwaye indalo inqwenela ukucoca ububi obugalelwa ngumntu emhlabeni. Amaxesha onyaka ayancitshiswa kwaye ayaphindaphindwa emva komnye, ethatha umntu engalindelanga. Utshintsho olukhulu lweplanethi: funda…
Pray, bantwana bakaThixo, thandazelani iIreland, iya kusokola kakhulu.
Thandazani, bantwana bakaThixo, thandazelani iMelika, iyakulothusa ilizwe.
Thandazani, bantwana bakaThixo, thandazani, ukungaziphathi kakuhle kwesi sizukulwana kuya kuyenza ibandezeleke. Umchasi-Kristu Malunga nomchasi kristu: funda… uya kuziphakamisa phambi kwabantu bakaThixo kwaye uninzi lwabantwana bakaThixo luya kuwa kukoyika nakukungazi.
I-Chile iya kugungqiswa kwaye abantu base-Argentina baya kuvuka kwingxubakaxaka kunye nokubandezeleka okukhulu; emva koko, ubuntu buya kuva ukuba ukubandezeleka kwaye abanye abantu baya kufuna indawo yokusabela kulo mhlaba usezantsi.
Bathandekayo Babantu bakaThixo: Lindani ngenkuthalo, ningemi emoyeni. Ubuntu bufuna ukukhula, ukusondela kulwazi lwakho, kwaye kufuneka anikezele ekuthandeni kukaThixo; Ngaphandle koko awuyi kugcinwa, uya kuwa ebusweni bobunzima bobubi. Vuka, vuka, vuka! Imiphefumlo yexhoba iyabandezeleka, iyazinikela kwaye izinikela ngenxa yabo bahlala esonweni. Isono sifuna isono, okulungileyo kufuna okulungileyo. Yiba nye kwiintliziyo ezingcwele.
Ngubani na onjengoThixo?
Amagqabantshintshi nguLuz de Maria
Bazalwane noodade, esiphelweni salo Myalezo, uMichael uMphathi weengelosi ezinkulu undinike lo mbono:
Ulwandle luyanyuka, luvuselelwa ngamandla angaveliyo kwindalo, kodwa abangelwa ngumntu ngokwakhe; luhlobo lweliza elidlula phantsi komgangatho wolwandle linyikimise yonke into elisendleleni yalo, kwaye njengoko liqhubela phambili, amandla ayanda kwaye kukho intshukumo eyoyikekayo eguqula iimpazamo ezithile zeetekonic, ngenxa yovavanyo lwenyukliya.
Umzuzwana ndibona umhlaba kunye neendlela, izakhiwo kunye nezindlu ziqhutywa ngenkani; ukuwa okuthile, kukho umzuzu wengxolo emva koko ukuthula okungcangcazelayo okulandelwa ngabantu abenza isijwili. Ndibona amazwe ahlukeneyo ngokulandelelana endikwaziyo ukuwafumanisa nalapho kulindeleke iinyikima zomhlaba ezinkulu.
Ngequbuliso indibonisa abantu, abanye kubhasikidi ecocekileyo abanye kubhasikidi enodaka, kwaye uthi kum: jonga ngaphakathi. Kwaye ndijonge ...
Thixo wam! Udaka luvutha njengodaka lwentaba-mlilo edubulayo kwaye ngaphakathi kwayo ndiyabona abantu benyelisa uThixo, kwenye ibhasikithi ndibona abantu bethandaza phakathi kweembandezelo; abayeki, kodwa bathandaza kuThixo ngothando olukhulu, kwaye bayancedwa kwaye bagcinwe kuba bengayeki kwimithandazo yabo.
Waphela ke lo mbono.
Ngokubhekisele kwintsalela engcwele: funda…
Utshintsho olukhulu lweplanethi: funda…
Malunga nomchasi kristu: funda…
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla.
← USimona no-Angela - Bathandaze…
UMarco Ferrari - Khetha ukuba ngubani… →